China ụdị njikọ njikọ na ụlọ ọrụ Chigong
Ezubere ụdị njikọ ụdị AID ma mee ya na DIN 22258-3, yana igwe nchara dị elu iji zute akụrụngwa igwe zuru oke.
A na -eji ụdị njikọ Block maka ijikọ agbụ njikọ DIN 22252 na agbụ njikọ DIN 22255 kwụ ọtọ naanị.
njikọ njikọ njikọta igwe nchara, njikọ njikọta njikọta ihe njikọta gburugburu, eriri igwe na-egwupụta ọla kọpa DIN 22252, DIN 22255 eriri njikọ njikọ dị larịị, DIN 22258-3 ụdị njikọ ụdị ngọngọ, agbụ ígwè na-ebu ihe na-ebugharị, sistemụ mmanya ụgbọ elu.
Mgbakọ nke ụdị njikọ njikọ dị ka egosiri ihe atụ dị n'elu.
Ọgụgụ 1: Block ụdị njikọ
Isiokwu 1: Ngọngọ ụdị njikọ akụkụ & akụrụngwa akụrụngwa
Nke gara aga: Kenter Ụdị njikọ
Osote: G-210 ịghasa Pin Chain Shackle